युसिमासको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
गत शनिबार युसिमास मेन्टल अर्थमेटिक नेपालको युसिमास मस्तिष्क अंकगणितीय दीक्षान्त समारोह—२०१४ सम्पन्न भएको छ । समारोहमा नेपाल अधिराज्यभरिबाट १० वर्ष देखि १५ वर्षसम्मका १ सय ३ युसीमास विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले भाग लिएका थिए । युसीमास दीक्षान्त समारोहको उद्घाटन प्रमुख अतिथि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. मनप्रसाद वाग्लेबाट भएको थियो ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको बाल्यकाल
बाराक ओबामा अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् । उनी त्यहाँ राष्ट्रपति हुने पहिलो काला जातिका नेता हुन् । राजनीतिमा लागेको साँढे चार वर्षको छोटो समयमा नै विश्वकै शक्तिशाली पदमा पुग्न सफल ओबामाको बाल्यकाल यस अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनी बाल्यकालको सम्झना सुनाउँदै भन्छन् :
गुजी पाएँ ! - by बूँद राना
आज युसिमासको वारेमा कुरा गरौं
UCMAS एक आइएसओ ९००१–२००० प्रमाणित बहुराष्ट्रिय कम्पनि हो । यसको स्थापना सन् १९९३ मा मलेशियामा भएको हो । यो प्रणाली विश्वका विकसित ३५ भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सफलतापूर्वक संचालन भइरहेको छ । नेपालमा सन् २००३ देखि युसिमासका कक्षाहरू संचालनमा आएको हो । यसको प्रशिक्षण कक्षा करिब ९ वर्ष पहिले युसिमास नेपालले आफ्नो मुख्य कार्यालयका जम्मा सातजना विद्यार्थीहरूबाट शुरु गरेको थियो ।
मेरिगोल्डकी प्रतिभा प्रतिस्ना केसी
प्रतिस्ना केसी रेडियो नेपालमा समाचार भन्छिन् । उनी भक्तपुर जिल्लाको बालकोटमा रहेको मेरिगोल्ड बोर्डिङ स्कुल, बालकोट, भक्तपुरमा कक्षा ६ मा पढ्छिन् । उनी पढाइमा सँधै पहिलो हुन्छिन् ।